Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Dalxiiska Kerala: Nadiifi Wabiga Chaliyar Paddle Hadda
Safarka Dalxiiska • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • News • Waajib ah • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Dhacdada Paddle Kerala
Daabacaadii 7 -aad ee Webiga Chaliyar Paddle waxaa lagu qaban doonaa Kerala, India, laga bilaabo Nofeembar 12 illaa 14, 2021, iyadoo farriin loo dirayo “caag -diid.”
Munaasabadda saddax-maalmood ee socod-baradka ah ee ay soo qabanqaabisay Jellyfish Watersports oo ay weheliso Dalxiiska Kerala waxay kor u qaadeysaa waayo-aragnimada biyo-mareennada ku habboon deegaanka ee isku xira dhallinyarada iyo dadka waaweyn.
Doontan oo dhererkeedu yahay 68-km ayaa ka bilaaban doonta Nilambur, oo ku taal cagaha hoose ee ghats-ka Galbeedka ee Malappuram.
Waxaa lagu soo gabagabeyn doonaa Beypore oo ku taal degmada Kozhikode, halkaas oo webiga kula kulmo Badda Carabta.
Borotokoolka badbaadada COVID ayaa la raaci doonaa dhacdada oo dhan iyo shahaadada tallaalka COVID ayaa shardi u ah ka -qaybgalka dhacdada. Sannadkan, marka la eego xaaladda, dhacdadan waxaa loo dallacsiin doonaa sidii munaasabad fenix ah si kor loogu qaado dhaqdhaqaaqyada dalxiiska ee Kerala. Munaasabaddu waxay bixin doontaa sahamin, kaamam, iyo il waayo -aragnimo ku -tallaalidda badda, iyada oo la adeegsanayo kayaks, SUPs, raft, iyo sannadkan maalinta saddexaad, qabanqaabiyeyaashu waxay soo bandhigayaan dabagalka (doonyaha) iyo doonyaha shiraaca leh oo ka dhigaya kala duwan ballaaran waxaa la isticmaalay doon aan biyaha lahayn oo matoor ku shaqaynaya, taas oo ah wax ku cusub in la sugo oo la kulmo.
Webiga Chaliyar Paddle wuxuu bixiyaa fursado heerar kala duwan laga bilaabo kuwa bilowga ah ilaa kuwa aan dabaasha lahayn ilaa kuwa xiiseeya isboortiga biyaha oo dhisan, kuwa jecel dabeecadda, dalxiisayaasha, carruurta, iyo dadka dhammaan qaybaha nolosha. Dhacdadu waxay si dabiici ah u dhiirrigelisaa webiyada Kerala, quruxdooda, cunnada Malabar ee dhabta ah, waxayna bixisaa fursad gaar ah oo ay kula kulmaan shaqsiyaadka isku fikirka ah. Kooxaha muusikada ee maxalliga ah ayaa gacmaha isku biirin doona si kor loogu qaado kartidooda waxayna u fidin doonaan fiiddo nasasho ah kuwa ciyaaraya. Cuntada waxaa diyaarin doona maqaayadaha ugu wanaagsan deegaanka sida Calicut Paragon.
“Webiga Chaliyar Paddle wuxuu diiradda saaray sidii webiyaasheena looga badbaadin lahaa wasakheynta magaalooyinka iyo kor u qaadista [kayak] madadaalada ee qof walba. Waa dhacdo caag ah oo caag ah, sidaa darteed baalalleydu waxay gacan ka geysan doonaan nadiifinta webiga inta la kaxeynayo. Waxaan iskaashi la samaynay NGO maxalli ah oo siin doona ka -qaybgalayaashu boorso qaadasho oo qashinka u geyn doona xaruntooda dib -u -warshadaynta iyo qashinka. Waxa kale oo ay ka -qaybgalayaasha ku bari doonaan kala -soocid habboon, isticmaalka mas'uul ah, iyo maaraynta qashinka. Waxaa oo dhan waxay ku saabsan tahay helitaanka Dalxiiska Kerala waaxda si ay uga soo kabato masiibada COVID oo ay weheliso faafitaanka wacyiga deegaanka iyo gaar ahaan wasakheynta balaastigga ee wabiga, ”ayuu yiri Kaushiq Kodithodika, Aasaasaha Isboortiga Biyaha Jellyfish.
Macluumaad dheeraad ah, oo ay ku jiraan macluumaadka diiwaangelinta dhacdada, ayaa laga yaabaa in la helo halkan.